OROMIYAA, BIYYA, DINAGDEE, SIYAASA, DAANGAA,Teessuma Lafaa fi Haala Qilleensaa fi dhimmoota Biroo – Beekan Guluma Erena
OROMIYAA, BIYYA, DINAGDEE, SIYAASA, DAANGAA,Teessuma Lafaa fi Haala Qilleensaa fi dhimmoota Biroo	Beekan Erena
Language Category, Personal Category, Politics Category January 7, 2017February 11, 2017#OROMOREVOLUTION
Biyyi Oromoo Oromiyaa ykn Orom-biyyaajedhama. Hiikaan isaa gabaabaatti biyyoo Oromoo jechuu dha. Maqaa Oromiyaa jedhu kana kan moggaasee dhimma itti bahuun babal’ise Adda Bilisummaa Oromoo ti. Haata’u malee namtichi biyya Jarmanii barsiisaan amantii Kiristaanaa bara 1860 keessa biyya Oromoon Ormaaniyaa jedhee moggaasee ture.
Sadarkaa 6ffaan Gadaa jedhamee beekama. Kana jechuun sirna Gadaa jechuu osoo hin taane warra waggaa saddeetiif aangoo biyya bulchuu qaban jechuu dha. Sadarkaalee Gadaa keessaa inni 6ffaa kun baayyee barbaachisaa dha. Warri bara saddeetiif aangoo harkaa qaban warra haaraatti yeroo aangoo dabarsan sirni kun Baallii walirraa fuudhuu ykn Baallii walitti dabarsuu jedhamee beekama. Aangoo warri harkaa qaban hin dabarsinu jechuun hin danda’amu. Guyyaa fi yeroo baallii walitti dabarsan kan himu ayyaantuu warra dhaha-urjii lakkaawanii dha. Abbootin Gadaa aangoon harka ture warra haaraatti eebbaa fi aannaniin dabarsu. Bokkuun mallattoo aangoo harkaa qabaachuu ti. Kanaaf abbootin gadaa bokkuu walitti dabarsu. Warri aangoo fudhate baallee guchii rifeensa mataatti suuqqatu. Baallii guchii kanas walitti dabarsu. Sadarkaan kun yeroo hoggana siyaasaa fi waraanaa kennanii dha. Hayyooti abbootii gadaa waggaa 16 dura sadarkaa 4ffaa keessatti filamu. Sirni isaan itti filaman lallabajedhamee beekama. Isaan kun abbootii gadaa wajjin waggaa saddeetiif biyya bulchu.
Sirna gadaa keessatti hogganooti yoo biyya bulchuu dadhaban aangoon harkaa fuudhama. Sirni kunBuqqisa jedhama. Gadaa keessatti aangoon hayyootaa walqixxummaa dhaan kennama. Kunis akka birokiraasii jaarmayaatti kan eenyu maal hojjataa jechuun kan qoodamu miti. Hayyoota gidduu wal caalaamaan jiru baayyee xiqqaa dha. Dhimma cimaa irratti yeroo haasa’amu miseensota hayyootaa keessaa tokko yoo hin argamin dhimmi sun bulfamee oggaa inni argamu irratti haasa’ama. Hafuu isaatiif ni adabama.
Itiyoophiyaan amma jirtu sirna empaayeraa ti. Micireen yookiis hundeen siyaasaa empaayerattii biyya Habashaa Abyisiiniyaa jedhamtu dha. Empaayera Itiyoophiyaa har’aa kan uume mootii Amaaraa Menilik jedhamu dha. Menilik dhuma jaarraa 19ffaa yeroo warri Awuroophaa biyyota Afriikaa qircatan biyya Oromoo fi uummatoota kibbaa weeraree qabate. Gaafa sanaa qabee hanga bara 1991tti gita bittoota Amaaraatu aangoo siyaasaa empaayerattii irratti wal jijjiire. Bara 1991 irraa qabee eempaayerattii bulchaa kan jiru gartuu Tigroota. Uummati Oromoo empaayerattii keessaa dhibbatti harka 40 ol tahuyyuu, yeroo hunda aangoo siyaasaa irraa dhiibamee moggaa jiraate…
Giti bittoota Habashaa yeroo barbadan nuti guraacha Afriikaa miti jedhanii eenyummaa isaanii haalu. Fudhatama argachuuf jecha maqaa Itiyophiyaa jedhu kan Macaafa Qulqulluu keessa jiru saamanii kan ofii taasifatan. Haa ta’u malee maqaan Itiyoophiyaa jedhu waan addaa utuu hin taane jecha afaan warra Giriik “Aithiops” jedhu irraa kan dhufe lafa uummata fuulli isaa gubataa jechuu dha. Barreessitoota Giriik warra akka Herodotus fi Pliny-faatu uummata gurraacha biyya Masrii fi sanaa gadii kan takkaa arganii hin beekne yeroo duraaf wayta argan “Aithiops” jedhanii moggaasan. Maqichi kan inni akeeku lafa uummatoota Kuush Kaaba-Bahaa Afriikaa ti. Maqaa biyyaa ykn mootummaa beekamee hin turre.
Jaarmayoti idil addunyaa filannoo daawwachuun beekaman yeroo sana Amerikaa irraa kan deemanInternational Republican Institute fi National Endowment for Democracy kan jedhaman akka hin daawwanne dhorkamanii dafanii biyyaa akka bahan taaasifaman. Kaadhimamtooti mormitootaa keessaahuu naannoolee baadiyyaa keessatti filannoo dorgomuuf dhihaatan baayyeen isaanii hidhaa fi dararaatu isaan mudate. Akkas iyyuu ta’ee uummatooti biyyattii wayyabi sirna wayyaanee diduu isaanii agarsiisuuf jecha murnoota siyaasaa wayyaanee ala jiran kamuu haa ta’uu filachuudhaan mormii wayyaanee irratti qaban mul’isan. Haa ta’u malee murni wayyaanee humna waraanaa fi tikaa to’annoo isaa jala jiranitti gargaaramee itti baha filmaatichaa gara dabarse. Uummata gochaa isaa mormuuf hiriira bahes gara jabinaan fixe. Keessaahuu humna lammiiwwaan Tigraayi qofa irraa ijaarrate Agaaziijedhamu itti bobbaasuun uummata hiriira nagaa bahe dhibbootaan lakkaawaman fixe. Mootummaan wayyaanee namoota nagaa 193 ajjeesuu isaa Koomishinuma mootummichi dhaabetu qoratee ragaa dhiheesse.
← KUSH ILAALCHISEE AKEEKA WAAQAYYOOkeessaan walitti hidhata saba Kuush fi uummata Oromoo: Malkamuu Jaatee
HIRQINFUU HIRBUU kutaa 1ffaafi 2ffaa-Lalisaa Indiris Adam -Asoosamoota gagabaaboo..itti kan fufudha..!! →